कसरी खोज इन्जिन अनुकूलन होटल प्रबंधन संग सहयोग गर्दछ?
खोज इन्जिन अनुकूलन कुनै पनि अनलाइन व्यापारको लागि आवश्यक छ कि यो एक स्थानीय व्यवसाय वा मुख्य उपक्रम हो कि छैन. यदि तपाईं आफ्नो शहरमा सानो होटलको मालिक हुनुहुन्छ भने, निवासीहरू र पर्यटकहरू पनि निश्चित गर्नुहोस्, यसको बारेमा जान्नुहोस्. तपाईंको होटल ब्रान्ड पहिचान सुधार गर्न उत्तम तरिका साइट सुरू गर्न र सबै खोजी इञ्जिन मानक अनुसार यसको अनुकूलन हो. गुणस्तर खोज इन्जिन अनुकूलन व्यवस्थापनले तपाईंलाई आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनहरू पूरा गर्न र लगानीमा फिर्ती बढाउन मद्दत गर्नेछ।.
सांख्यिकीय डेटा को अनुसार, जो पहिलो वेबसाइट खोज पेज मा सूचीबद्ध वेबसाइटहरु को सबै खोज (जैविक) यातायात को लगभग 92% उत्पन्न गर्दछ. दोस्रो खोज परिणाम पृष्ठमा जाने हुँदा, ट्राफिक 95 %ले घट्यो, र पछिल्लो पृष्ठहरूको लागि 80% र 60% द्वारा. "यसबाहेक, ती प्रयोगकर्ताहरू विश्वसनीय र सान्दर्भिक रूपमा त्यहाँ राखिएका वेबसाइटहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी प्रयोगकर्ताहरू छिट्टै नै चौथो र5औं SERP पृष्ठहरू खुल्ला हुन्छन्. तिनीहरू आंशिक रूपमा सही रूपमा Google रैंकिंग एल्गोरिथ्म पहिलो SERP पृष्ठमा सबैभन्दा सान्दर्भिक वेब पेजहरू देखाउन डिजाइन गरिएको छ. यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईको होटल वेबसाइट पहिलो SERP पृष्ठमा देखा पर्दैन, संभावना प्रयोगकर्ताहरूले तपाईको वेब स्रोतलाई 6% भन्दा कम छ.
मेरो होटल वेबसाइट को लागि एसईओ प्रबंधन को फायदे के हो?
सबै भन्दा पहिले, गुणवत्ता वेबसाइट अप्टिमाइजेसन प्रदान गरेर, तपाईंलाई आफ्नो बजार आला प्रतियोगिहरु को अगाडी रहन को मौका र पछि आफ्नो राजस्व डबल. साथै, एक डिजाइन गरिएको र आकर्षक वेबसाइटले तपाईंको होटेलको विश्वसनीयता स्थापना गर्न र ब्रान्ड पहिचान सुधार गर्न सक्छ. अर्डरहरू गर्नु अघि ती अपार्टमेन्टहरू चेक गर्न सक्छन् तपाईलाई अधिक वफादार हुनेछ. र अन्तमा, तपाईको साइटमा ट्राफिक बढेर, तपाइँ आफ्नो बिक्री बढाउनुहुनेछ र तपाईंको होटल व्यवसाय समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ.
SERP मा होटल वेबसाइट दृश्यता सुधार गर्न सुझावहरू
त्यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो होटल व्यवसाय अनलाइन उपस्थिति बढाउन सक्नुहुन्छ कसरी. यो अनुच्छेदमा, हामी तपाइँको साइट बिक्री र मार्केटिंगको लागि अनुकूलित गर्न सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्कलन गर्दछौं.
गुणवत्ता वास्तविक तस्वीरहरु (1 9)
प्रयोगकर्ताहरूले तपाईलाई प्रदान गर्नुभएको फोटोहरू. यात्रीहरूले आफ्नो खोज सुरु गर्नको लागि नेट ब्राउज गर्न सबै भन्दा सुन्दर र आदर्श स्थानमा होटलको लागि बस्न. तिनीहरूसँग उपयुक्त उच्च-रिजोलुसन तस्बिरहरू र कहिलेकाहीं प्रोमो भिडीयो द्वारा होटेलको गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्छ भने त्यहाँ छन्. सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो संभावित ग्राहकहरु लाई तपाईंको होटल अपार्टमेट्स, होटल को बाहिर क्षेत्र, लबी र बारहरु को उच्च गुणवत्ता वाले चित्रहरु संग प्रदान गर्नुहोस. यसबाहेक, तपाईंको फोटोहरू सम्पादन गर्न सावधान रहनुहोस् किनकि थुप्रै समस्याहरू छन् जब यात्रुहरूलाई ट्रिगर गरियो किनभने मुख्य वेबसाइटमा प्रदान गरिएका तस्बिरहरू वास्तविकताबाट टाढा छन्।.
लिखित आकर्षक वर्णन (1 9)
एक होटल क्षेत्र मा, होटल्स सूट को गुणवत्ता कथाहरु एक जरूरी छ! तपाईलाई सम्भावित कथालाई तपाइँका सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाइँसँग किताब गर्न कम्पाउन्ट गर्न आवश्यक छ. यो यात्रीको मार्गदर्शक सिर्जना गर्न यो सल्लाह छ (ई. g. नजिकैका स्थलहरू वर्णन गर्नुहोस् वा शहर भरमा पर्यटक मार्गहरू बनाउनुहोस्). तपाईंको होटेल शहरको हृदयमा राखिएको छ भन्न पर्याप्त छैन. तपाईंले तपाईंलाई र तिम्रो शहरमा मानिसहरूको रुचि बढाउनु पर्छ.
सोशल मिडिया बटनहरू (1 9)
फेसबुक, Google+, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको रूपमा. यो तपाईंको ब्रान्ड जागरूकता बढाउन र गुगल र अन्य खोज ईन्जिनियरिङ्मा तपाईंको रैंकिंग सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग आकर्षक र उज्ज्वल सामाजिक खाताहरू छन् जहाँ मानिसहरूले तपाईंको होटलको बारेमा आफ्नो छाप छाप्न र उनीहरूलाई चिन्ता गर्ने प्रश्न सोध्न सक्छन् Source .